Basasehlula abahlaseli nabezizwe ngokuqopha umlando - Bayede News
Home » Basasehlula abahlaseli nabezizwe ngokuqopha umlando
Basasehlula abahlaseli nabezizwe ngokuqopha umlando
Ingazuza inkolo kwezokuvakasha okuyimboni ebanzi
AboHlanga bahlulwa ngisho wukubhala umlando ababe yingxenye yawo mhla wenzeka
Enye yezinjongo yomzabalazo waboHlanga kwabe kuwukwazi ukukhulula imiqondo yabo ekukwazini ukuqopha lokho okuyifagugu labo okubalwa ngisho ukubhalwa kwezigameko zomlando. Lena kwabe kungeyona into noma iphupho elingephumelele. Empeleni kwabe kuyinto emqoka ngoba ngokunothisa umnotho ngamandla okukwazi ukusho nokubhala lokho okuthandayo usuke usuthathe igxathu lokuqala ekuzikhululeni. Nokho uma sibheka eminyakeni engama-25 eyedlule okuthola inkululeko kuleli, kubanga amahloni ukwamukela ukuthi okwamanje labo ababengabahlaseli, abacindezeli basasehlula ngokuqopha umlando. Uma ngithi bayasehlula ngisho khona ukuthi kabagogodile nje kuphela ekubhaleni owabo umlando kepha nalo okuthiwa ngowethu bayasampula.
Eminyakeni emibili eyedlule ngibe yingxenye yohambo oluye eGreat Britain. Lapha ngibe nethuba lokuhambela izindawo zomlando, khona lapho ngaba nethuba lokungqumuza nosomlando bakhona ngathenga namabhuku omlando. Elinye nje ibhuku lomlando engabuya nalo ngelibahlwe nguDavid Truesdale kanye noJohn Young. Isihloko salo sithi: Victoria’s Harvest – The Irish Soldiers in the Zulu War of 1879.
Okumqoka ngaleli bhuku wukuthi akulona elingempi yaseSandlwana le ababhali abathi yiMpi kaZulu, kepha lingamadodana ama-Irish ayeyibambe ngaleso sikhathi ngaphansi kwempi yeNdlovukazi yamaNgisi. Akukhona konke okuleli bhuku engivumelana nakho kusuka kumongo womlando kanye nezithombe. Iphuzu elimqoka kimi lapha wukuthi izizukulwane zabahlaseli zisaqhubeka nokubhala umlando wazo kanye nowethu bedweba isithombe othi uma ujula uvuna bona. Ubani ongabasola ngoba phela akukho okuvimba aboHlanga ukuba nabo babhale lokho okuwumlando wabo.
Ukukhala kwami kusekutheni njengoba beqhubeka nje eminye imilando abayibhalayo iyedusa (kokunye ngenhloso) eminye zinganekwano uqobo lwazo.
Isibonelo nje iningi lababhali ngisho imizi yaMakhosi imbala baxabana nje akukhona ngoba kunomlando othize womndeni owaqoshwa yinsizwa yalapha ekhaya noma isalukazi, cha kubangwa umbhalo oseKillie Campbell owabhalwa yiNgisi thizeni. Nalo othi uma ulalele ukuthi kambe labe ligogode kwayaphi ngalo mlando uthole ukuthi kwabe kunguMfundisi nje noma umuntu ongeyena nosomlamdo. Lokhu ngikuphawula ngoba sekuyavama ukuthi nxa kubhalwa ngowethu umlando kukhiqizwa amabhukumlando kungalandelwa imigomo eyejwayelekile, umuntu (umbhali weNgisi) athi lokhu akubhalile kwashiwo nguZulu ngesibongo kwaNongoma. Bangaki-ke oZulu ngesibongo eHlalankosi? Yena lo Zulu uwazi kangakanani umlando lowo akhuluma ngawo?
Elinye ibhuku elibhalwe ngumbhali uJohn Laband lingqamisa ngobungozi bokuyekelela abezizwe ukuthi babhale ngomlando wethu singasho lutho. ULaband osebhale amabhuku amaningi afana neRope of Sand ne-Assasination of King Shaka, emsebenzini wakhe wakamuva othi: The Eight Zulu Kings: From Shaka to Goodwill Zwelithini, uLaband ubhale ngembizo yakamuva kaZulu neyabe ilwa nokuqedwa kwe-Ingonyama Trust. Njengomuntu owayekhona kuqalwa kuze kuyophetha nginomuzwa wokuthi kukhona lapho kwakumele abuze khona, kepha angikho lapho. Lapho ngikhona wukuthi ungemsole ngoba izinkulungwane zamaZulu ezabe ziyingxenye yembizo leyo azibhale lutho ngomlando ezabe zikhona wenzeka.
Ibhuku eliqhakambisa umsebenzi wezintatheli eziphenyayo
Lokhu kuyenzeka nangomlando womzabalazo. Isibonelo nje ibhuku elabhawa nguHilda Bernstein elithi: The Rift – The Exile Experience of South Africans lifakazela lokhu engikushoyo ngenhla.
Yebo kuhle akwenzile ukuba aqoqe lo mlando kepha umbuzo uthi ukube akwakwenzanga ngabe uphi nokuthi abanikazi bawo bona babehlele ukwenzani? Le nkosikazi ibhale kakhulu ngaboHlanga isebenzisa ukuxhumana kwayo ne-African National Congress.
Ekhuluma ngayo uMandela wathi: “Ibhuku likaHilda Bernstein ligcwalisa leso sikhawu solwazi ngezwe lethu nabantu balo, kodwa ligqamisa ulwazi ngokudingiswa nokwenzeka ekudingisweni.” Lokhu kuphawula kukaMandela kukuqoqa konke. NjengaboHlanga siyingxenye yomlando wethu kepha asibhali futhi siwuzwa kangcono uma ubhalwa ngabahlaseli noma abezizwe. Hamba emitapweni yolwazi lapha ezindaweni zakobantu ubale okubhalwe ngathi, nayithi nangolimi lwethu.
UMfowakwaNomajalimane Nov 6, 2020